Dad badan ayaa aaminsan in MP4 waa horumar dabiici ah oo MP3 ah, laakiin iyaga oo aan haysan wax la mid ah. Iyadoo MP3 waa hogaamiyaha suuqa ay falalka iyo falalka in industry ee audio, MP4 ku dagaalama in ay si isa soo taraysa ee suuq cammiran, video. Haddana ma aha oo kaliya noocan ah warbaahinta in ay tahay socon, MP4 qaab weel badan style gaar ah waa. Inside waxay noqon kartaa audio, video iyo xitaa subtitles. Hubi nala kala muhiimsan ee u dhexeeya MP3 iyo MP4.
Qeybta 1: MP3 vs MP4, Faraqa u dhexeeya MP3 iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MP3
Developer Plugin MP3 waxaa ay diyaariyeen Institute Fraunhofer ah, hay'ad Jarmal ah in uu leeyahay in ka badan 60 unug oo dalka oo dhan. Iyadoo in ka badan $ 1 bilyan oo in ka badan 12,000 oo shaqaale miisaaniyad, unug kasta waxay mas'uul ka tahay mid ka mid technology. MP3 waa ugu caansan iyaga iyo abuuraa kun oo euros sanadkii royalties. Currently hayo Machadka ISO - Ururka Caalamiga ah ee jaango'an - jirka ah oo ka kooban cilmi-ka dal oo kala duwan, qaabka loo abuuray by Apple.
Taariikhda Mid ka mid ah noocyada ugu horeysay garasho audio la khasaare ku dhowaad dismo. MP3 ayaa bilaabay in ay u suurta markii koox cilmibaadhayaal ah German dooneen si ay u baahin audio ee tayo sare leh in ka badan khadadka telefoonka. Cilmi baaris fara badan ka dib, version hore ee MP3 ee taariikhda dib u 1995, markii la sii daayay kumbiyuutarada iyada oo liisanka shareware ah. Iyada oo ku saleysan si toos ah QuickTime qaab, oo caan ah oo ku saabsan nidaamyada MAC, MPG4 waxaa ay caan ku caan awoodin in uu kaydiyo audio, video iyo subtitles. Version ugu horeeya ee la sii daayay sanadkii 2001 ka dib markii la cusbooneysiiyey 2003. Inkasta oo waxa badan qabaa, MP4 ma aha horumar ah MP3, dhab ahaantii, oo ay wax la leedahay.
Caanka Iyadoo MP4 qaadi karaan qaabab kala duwan ee macluumaadka, MP3 kaliya la shaqeeyaa maqal ah, si kastaba ha ahaatee, oo ay caan Yaqiinsan sababtuna waxaa weeye baaxadda weyn oo tayo leh codka iyo file. Iyada oo ku dhowaad heerka khasaaraha tayada lahayn, aannu u helno file ah lagu shido si ay MP4 oo soo saari by dhammaan noocyada kala duwan ee software loo maqli karo warbaahinta suuqa. Qaab noqday caan ah oo ay feature oo waaweyn: kaydisaa audio kaliya ma ahan, laakiin video iyo xitaa waayay wuxuuna noqday caan ah inta badan sababo ay ka shakiyaan, sida in mid ka mid ah qaababka ay ka doorteen ee content u rippers Internet sida daadkii, kaas oo ka kooban Upload in MP4 fududaato ee size kama dambaysta ah ee file haynay audio iyo video ku xirmo isku aan midho badan.
Durdurrada Data Nashqadda qaab MP3 qeexaya sida socodka xogta waa in uu ahaadaa mid habaysan oo lagu micneeyey, laakiinse uma samayn sidii encoder waa in la hirgeliyo inta uu sharciga ku dhisay dukumiintiyada. Tani waxay u ogolaaneysaa tartan u dhexeeya saarayaasha kala duwan, taas oo faa'iido u ah user iyo tiknoolajiyada. In MP3 leeyahay, tusaale ahaan, filterbank ah, MDCT ah, FFT, iwm Si ka duwan MP3, MP4 xogta la farsameeyo dhex qulqulka gaarka loo leeyahay in la geliyo si gooni gooni ah per track. Si aad u furato noocyada gaarka ah ee macluumaad user u baahan yahay ee codecs iyo dhowr rukhsadda in la gaarayaa internetka ee abuura ah, sida Cinwaan ah ee MPEG-4 qaab qoraalka Mudaysan ama qaab audio MPEG 4-part 2 ama 10.
Metadata Fursadaha metadata MP3 oo jira aad uga fudud in wax ka bedel badan version of MP4 oo u muuqdaan in ay ka badan faa'iidada leh. Waxaa Isticmaalka aad edit karaa artist gabayga aad dhageysto, album, magaca album, sanad, sifayn, laxamiistaha, track, iwm ka dib wax walba waa la soo bandhigay MP3 ciyaaryahan aad. Quruxda iyo abaabulay. Xitaa Waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah barnaamij freeware yar oo si toos ah u cusbooneysiin metadata aad file MP3. Iyadoo fursadaha metadata ka yar MP3, MP4 diiradda badan oo ku saabsan faahfaahin dhismaha ah ee video aad daawashada ama xataa music (kiiskan fursadaha jira xariifnimo). Qoraalka ayaa sidoo kale ka heli kartaa metadata iyo kiiskan codsiyada aad u xiiso badan kici karaan. Xun marka la barbar dhigo qaab MP3 waa in tafatirka this via adeegyada internet uma fududa ama caadi ah.
Faa'iido MP3 waxay leedahay arrimo badan oo in qaabka ugu caansan audio adduunka ka dhigaysa:
* Tayada audio weli gebi ahaanba la mid ah, khasaare ku dhow yihiin shucaaca dismo dhegahayaga.
* uu guul Waxaa in badan sabab u ah ciyaartoyda MP3 caanka in caan ku ah heesaha iyo kordhinta laftiisa horraantii 2000.
* xaqiiqda kale waa in ahan wax macquul ah in la helo ciyaaryahan file oo aan ku taageeri qaab MP3 ah. Sida MP4 fiican la odhan karaa:
* Waa weel of videos iyo dad badan oo qaabab warbaahinta kale. MP4 u muuqanayo in MP4A tusaale ahaan, in uu yahay nooca kaliya ee audio iyo MP3 isku dayo in uu shaqo la mid ah sameeyo.
* Qodob kale oo wanaagsan, dabcan waa miday ee file a in qaab MP4 iyo sidoo kale video iyo maqal ah, xitaa Cinwaan awooddo in lagu daro xirmo isku.
* Intaas waxaa sii dheer, inta badan badan oo maqal ah iyo video ciyaartoyda taageeraan qaabka. Converters sidoo kale fududeeyo in ay si la mid ah.
Qasaarooyinka Dhinaca kale, MP3 ah
* waa kuwa ugu nugul ee labada, arrinta ammaanka, iyo tayada. Haddii loo abuuray qof oo aan ogayn wixii ugu yaraan loo baahan yahay, heli doonaa audio tayo hoose. Dhinaca kale, MP4
* tartan ah dagaal kulul, oo aan la dhici MP3 ah. Against MP4 jiraan, tusaale ahaan, qaab MKV ah, taas oo ah weel gaar ah video for files-xallinta sare, iyaga oo leh tayo la mid ah oo aan la sii kordhaya baaxadda, oo MP4 uusan awoodin in uu.
U isticmaala in ay Bulshada qof kasta in uu leeyahay file maqal ah on your computer. MP3 waa milkiilaha suuqa taranta ee audio ee internetka. Waxaa loo adeegsaday xirfad labada heerka ugu sareeyay xoogaa in ay hubisaa 0% khasaaro tayo leh, sida dadka da'da yar iyo MP3 ciyaartoyda qalabka. MP4 ayaa ka duwan MP3 suuqa marka aan sheeg daawadayaasha bartilmaameedka oo isticmaala nooca file. Kuwa dooran MP4 waxaa daawashada cajaladaha dheeraad ah iyo filimada, sida maanta waxaa si gaar ah loo isticmaalo qaab u videos. Dabcan waxaa macquul ah ee caption ka soo weheliyaan kaloo ka caawisaa in wajigan. Format ayaa xitaa la tartami karta kordhin kale ee video qaybta, laakiin MP3 ee category audio waa looga adkaan.
Related links 1. Qeexidda: MP3
3. Sidee MP3 Files Work 1. Waa Maxay Qaabka MP4?
2. Waa maxay File MP4 ah?
3. Waa maxay waxa xaqiiq MP4 ah?
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MP3?
MP4 iyo MP3 jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo MP3 isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo MP3 video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama MP3 inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya file MP4 ama MP3 in aad rabto in aad kala soo bixi ka. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli kartaa ugu fiican MP4 tayada iyo MP3 files.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 ay u noqon MP3 adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "MP3".
Talaabada 5 Play faylka MP3 bixi
> Resource > MP4 > MP3 vs MP4, Faraqa u dhexeeya MP3 iyo MP4